မင်းခိုင် – ဖြူ/မည်း လော့ဂျစ်ကို ပုန်ကန်ခြင်း | MoeMaKa Burmese News & Media
လော့ဂျစ်ဆိုတာ ယုတ္တိဗေဒလို့ အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်ခြင်းပါ။ အဲလိုပြောတော့ သက်ရှိလူသားတွေနဲ့ပဲ ဆိုင်တယ်လို့ ထင်ရတဲ့ ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်ခြင်းဟာ ဘယ်နဲ့ သက်မဲ့စက်တွေဆီ ရောက်သွားပါလိမ့်လို့ မျက်စိလည်ချင်စရာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ သေချာတွေးကြည့်ရင်တော့ ထူးပြီး အံ့သြစရာ မကောင်းပါဘူး။ ဒီလူပါ … လူတွေ ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်တယ်ဆိုတာ အဓိကအဆင့် နှစ်ဆင့်ပဲ ရှိပါတယ်။ ပထမအဆင့်က ပေတံတခုနဲ့ ချိန်ထိုးကြည့်ခြင်းပါ။ ဒုတိယအဆင့်က ဆုံးဖြတ်ခြင်းပါ။ အဲဒါ လော့ဂျစ်ပါပဲ။
ဥပမာ လိမ်တာမကောင်းဘူးလို့ သိထားတဲ့ လူတယောက်ဟာ လိမ်ပြောနေတဲ့ လူတယောက်ကို တွေ့တဲ့အခါ သူ့ပေတံလေးနဲ့ တိုင်းပြီး ဟာ ဒီလူ မကောင်းဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်ပါမယ်။ ဒါ အလွယ်ဆုံး ဥပမာပေါ့ဗျာ။ အဲ့ဒါ လော့ဂျစ်သဘောပါပဲ။ အဲ့ဒီ့ပေတံကို ဘယ်က ရပါသလဲ။ အတွေ့အကြုံက ရတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင် (ကျောင်း၊ အိမ်)က ရတယ်။ အဲဒီ့ ရှိထားတဲ့ပေတဲ့နဲ့ တိုင်းပြီး ဆုံးဖြတ်ချက် ချခြင်းပါပဲ။ ဥပမာ ကုန်သည်တယောက်ဟာ ဒီကုန်စည်ဟာ ဒီအချိန်မှာ ဈေးတက်တတ်တယ်၊ ၀ယ်မှပဲဆိုတာ ကုန်သည်ရဲ့လော့ဂျစ်ပါပဲ။ “ဒီအချိန်မှာ ဈေးတက်တတ်တယ်”ဆိုတဲ့ အတွေ့အကြုံ ပေတံကို သုံးပြီး ၀ယ်ထားသင့်တယ်ဆိုတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ချခြင်းပါ။
ထားပါတော့ … လိုရင်းပြန်ဆက်ရရင် … အဲလို ဆုံးဖြတ်ချက် (result) ထုတ်ပေးဖို့ ပေတံလိုပါတယ်။ လော့ဂျစ်ဂိတ်တွေအတွက် ပေတံကို အစဉ်အလာအစု (အစဉ်အလာလော့ဂျစ်)ပေါ်မှာ အခြေခံပြီး တည်ဆောက်ပါတယ်။ အစဉ်အလာအစုရဲ့သဘောက အစုဝင်တခုဟာ အစုတခုမှာ ပါတယ်ဆိုတဲ့ အခြေအနေရယ်၊ မပါဘူးဆိုတဲ့ အခြေအနေရယ် စုစုပေါင်း အခြအနေ နှစ်ခုပေါ်မှာပဲ စဉ်းစားပါတယ်။ ကြားအခြေအနေဆိုတာ မရှိပါဘူး။ (တ၀က်တော့ ပါတယ်ဆိုတာမျိုး လုပ်လို့မရပါဘူး) အဲဒီ့အခြေအနေနှစ်မျိုးကို လော့ဂျစ်မှာ 1,0ဆိုပြီး ညွှန်းပါတယ်။ (True/False, Low/High, On/Off လို့ ပြောလည်း ရပါတယ်) အဓိပ္ပာယ်က လော့ဂျစ်ဂိတ်နားလည်တဲ့ပေတံက နှစ်မျိုးပဲရှိပါတယ်။ 1 မဟုတ်ရင်0ပါပဲ။ True မဟုတ်ရင် False ပါပဲ။ အဲဒါကိုမှ OR, AND, NOT ဆိုတဲ့ operation တွေ သုံးပြီး ရလဒ်ကို ထုတ်ပါတယ်။
ဥပမာ – If P, then X or
P ဖြစ်ရင် X ဖြစ်ပါ (X လို့ ဆုံးဖြတ်ပေးပါ)။ P မဟုတ်ရင် Y လို့ ဆုံးဖြတ်ပေးပါဆိုရင် …. လော့ဂျစ်ဂိတ်က P လား not P လားဆိုတာ ကြည့်ပြီး (အဲဒီ့ပေတံနဲ့တိုင်းပြီး) X ဒါမဟုတ် Y လို့ ဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်ပါတယ် (အဖြေထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်)။ ဆိုတော့ စက်အနေနဲ့ သိတာ P မဟုတ်ရင် not P ပါပဲ။
(ကြားဖြတ်လို့ ပြောရရင် လော့ဂျစ်ဂိတ်သင်တဲ့အခါ သူ့ရဲ့အခြေခံ အစုသီအိုရီဖြစ်တဲ့ ဒီမောဂမ်သီအိုရီ De Morgan’s Theory တို့၊ ဘူလီယမ်သီအိုရီ Boolean Theory တို့ကို အရင်သင်သင့်ပါတယ်။ အဲဒါတွေ မသင်ဘဲ NAND gate သုံးပြီး NOR gate ဆောက်ပြပါဆိုတော့ .. အပေါင်းအမြှောက်သဘောကို မသိဘဲ အစားကို သင်ပေးသလိုပါပဲ၊ ကျောင်းသားတွေခမျာ ဖတ်စာအုပ်ထဲ ပေးထားတဲ့ မှုန်ဝါးဝါးပုံလေးတွေကို ဘုမသိဘမသိ အလွတ်ကျက်ရပါတော့တယ်၊ တော်တော်သနားဖို့ကောင်းပါတယ်)
လော့ဖီက အဲလိုလည်း မိတ်ဆက်လိုက်ရော ပညာတတ်အသိုင်းအ၀န်းက အစဉ်အလာသမားတွေ အကုန်လုံး ရှော့ခ်ရကုန်ပြီး ဖော့ဇီလော့ဂျစ်ကို ၀ိုင်းဖဲ့ပါတော့တယ်။ ဘာကလေပါမောက္ခ William Kahan ကဆို ဖော့ဇီလော့ဂျစ်ကို ဘိန်း (cocaine of science)လို့တောင် ဆိုပါတယ်။ သူတို့စိတ်ထဲ လော့ဂျစ်ဆိုတာ တိကျပြတ်သားရမယ်၊ တိကျပြတ်သားတဲ့ အဖြေကို ထုတ်ပေးနိုင်ရပါမယ်။ If P, then Q ဆို …. P ဖြစ်ရင် Q လို့ တိတိကျကျအဖြေထုတ်တာမျိုးကို လိုချင်ပါတယ်။ (P မဟုတ်ရင် နောက်အဖြေတခုပေါ့) ဒါပေမဲ့ ဖော့ဇီက P မဟုတ်လည်း P နီးပါး (mostly P)ဆို Q နီးပါး (mostly Q)လို့ အဖြေထုတ်ပါတယ်။ နောက်တမျိုးပြောရရင် အစဉ်အလာလော့ဂျစ်မှာ 1 နဲ့0ပဲ ရှိပေမယ့် ဖော့ဇီလော့ဂျစ်မှာ 1 နဲ့0ကြားက ကြိုက်တဲ့ကိန်းဖြစ်လို့ရပါတယ်။ အဲဒီ့မှာတင် ဖော့ဇီလော့ဂျစ်ဟာ မရေမရာရလဒ်တွေ ထုတ်ပေးတဲ့ ဘာမှအသုံးမ၀င်တဲ့လော့ဂျစ်လို့ ထင်ပါတော့တယ်။
ဒါ … အာဏာရှင်စနစ် ဒါမှမဟုတ် စစ်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ် ဘာကြောင့် ကျရှုံးရသလဲ၊ ဘာကြောင့် မအောင်မြင်သလဲဆိုတာပါပဲ။
နောက် … ဖြူမည်းစဉ်းစားနေတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းတခု (တဖက်ကဘာဆိုတဲ့ Feedback ကိုလည်း ပြန်မစဉ်းစားတဲ့ လူအဖွဲ့အစည်းတခု) ဘာကြောင့် မတိုးတက်မငြိမ်းချမ်းရသလဲဆိုတာပါပဲ။
တခါလောက် ဖြူမည်းမျက်မှန်ကို ချွတ်ပြီး ရောင်စုံအလှကို ခံစားကြည့်စေချင်တယ်ဗျာ … ။
(မြန်မာ့နိုင်ငံရေး … ဖော့ဇီလော့ဂျစ် လွှမ်းစေသောဝ် … )
(မြန်မာ့လူဘောင်အဖွဲ့အစည်း …. ဖော့ဇီလော့ဂျစ် လွှမ်းစေသောဝ် … )